Billadda uu qaatay, waxyaabaha lagu baray tababarka iyo wax walba oo ku saabsan gabagabada tababarkii militari ee Son Heung-min… (+Sawiro) – Gool FM
Billadda uu qaatay, waxyaabaha lagu baray tababarka iyo wax walba oo ku saabsan gabagabada tababarkii militari ee Son Heung-min… (+Sawiro)
Haaruun May 8, 2020
(Jeju) 08 Maaajo 2020. Laacibka kooxda Tottenham Hotspur ee Son Heung-min ayaa ka soo gubday tababarkii waajibka ahaa ee militari ee dalka Koonfur Korea, waxaana la guddoonsiiyay biladda waxqabadkii ugu fiicnaa.
27-jirkan ayaa lagu qasbay inuu u adeego qaranka, maadaama ay tahay waajib saaran dhammaan ragga dalkiisa, waxaana uu tababarka ku qaatay Jeju Island saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay.
Waxaana lagu soo warramayaa inuu xiddigga Spurs xirfaddiisa wanaagsan ku cajab galiyay taliyeyaashiisa.
Son ayaa si gaar ah ugu wanaagsanaaday tababarkii toogashada maaddaama uu toogashada la helay dhammaan tobankii isku day ee uu sameeyay, waxaana uu aqoonsi wayn kaga helay saraakiisha tababarka bixinayay.
Waxaa la guddoonsiiyay billad uu ku muteystay ka dhex muuqashada 157 qof oo ururkiisa ka tirsan.
Laacibkan ayaa la soo sawiray isagoo guddoomaya biladda misena xiran labiska militariga.
Xubin ka tirsan ciidanka badda ee Jamhuuriyadda Korea ayaa shabakadda luuqadda Ingiriiska ku hadasha ee Korea Herald u sheegay in Son uu helay biladda ‘Pilsung’ taasoo ka mid ah shanta billaadood ee la siiyo shaqsiyaadka ugu waxqabadka wanaagsan.
“Dhammaan casharrada (koorsooyinka) waxaa loo bixiyay si caddaalad ah, loona hoggaansamay, waxaana saraakiisha bixinayay tababarka militari ay sheegeen inuu buuxda oo lagu kalsoon yahay uu u qaatay tababarka” ayuu yiri sarkaal ka hadlayay tababarkii Son.
Waxaa weeraryahanka Tottenham markii hore qasab ku ahayd inuu tababar militari oo labo sano ah soo maro ka hor inta uusan buuxin da’da 28 sano si uu u guto waajibaadka qaran.
Si kastaba ha ahaatee, Son iyo xubnihii qaranka South Korea u matalay ciyaarihii qaaradda Asia ee sanadkii 2018, isla markaasna ay koobka u soo hoyeen dalkooda, waxaa tababarkooda lagu soo koobay saddex toddobaad kaddib guushii koobka qaramada qaaradda Asia.
Laacibkan ayaa dhaawac dartii ay Tottenham uga saartay qorshaheeda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kaddib markii uu gacanta ka jabay bishii Marc, hase ahaatee, hakadka uu coronavirus galiyay ciyaaraha kubadda cagta ayaa Son u saamaxay inuu dhaawicii ka soo kabsado, isla markaasna uu soo guto tababarkii militari ee waajibka ku ahaa.
Intii uu ku jiray tababarka, Son ayaa ka soo qalin jabiyay duruuso kala duwan sida toogashada iyo ku dagaallamidda beynaadda, dagaalka shaqsiga ah, gargaarka deg degga ah iyo xirfado kale.
Isku soo wada duub e, waxaa hadda la rajeynayaa in laacibka Koonfur Korea uu ku soo laabto dalka Ingiriiska toddobaadyada soo aaddan, xilli Spurs ay dhowaan gudbiyeen codsi ku aaddan in xeradooda tababarka kubadda cagta ay dib u furaan, iyadoo goor dhow la rajeynayo in horyaalka Premier League halkiisii laga sii ambaqaado.
Spurs ayaa dib u furtay hadda xeradeeda tababarka maalintii talaadada ahayd kaddib bandowgii dalkaas ee uu sababta u ahaa coronavirus, waxaana ciyaartoyda loo oggolaan doonaa inay isticmaalaan qalabka tababarka balse ay u hoggaansamaan sharciga kala fogaanta.
Barcelona oo billawday tababarka kaddib natiijooyinkii baaritaanka coronavirus… (kaliya hal ciyaaryahan ayaa ka maqnaa?)